मार्क्स-लेनिन नबुझेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु | "हरेक घरमा धारो होस्, हरेक गाउँमा सिंचाइ होस्"
मार्क्स-लेनिन नबुझेका नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरु
July 5, 2018 by एस.डि.अर्पण
६ जुलाई, वार्सावा ।
नेपाली राजनीतिमा कम्‍युनिष्ट पार्टीहरुको उपस्थिति र प्रभाव बलियो देखिने मात्र नभएर अहिले सत्तरुढ दल नै एकीकृत रुपमा अगाडी बढी रहेका छन् । सडक संघर्ष, सशस्त्र संघर्ष, सदन र भत्ता भोग सबैमा कम्‍युनिष्ट पार्टीले हिस्सेदारी लिएका छन्। नेपाली समाज रुपान्तरणमा कम्‍युनिष्ट पार्टीको योगदान के हो। नेपाल कम्‍युनिष्ट पार्टीहरुले मार्क्स र लेनिनका दर्शन कत्तिको बुझेका छन् र अझै कम्‍युनिष्ट पार्टीको आवश्‍यकता छ वा छैन ? यही विषयमा समाजशास्त्री चैतन्‍य मिश्र र कम्‍युनिष्ट नेता राम कार्कीसँगको कुराकानी आधारमा अन्नपुर्ण पोस्टले केहि समय अगाडी तयार पारेको विश्लेषण अहिले पनि समय सान्दर्भिक लागेर हामीले प्रकाशित गरेका छौँ ।
नेपालमा चिनियाँ प्रभाव
भड्काउमा भएको थियो क्रान्ति
मिश्रको बुझाईमा नेपालमा माओको प्रभाव पर्न थालेदेखि नै नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले ‘जनयुद्ध’मा जाने नीति लिएका थिए । झापाली विद्रोह पनि त्यसैको सिलसिला थियो । त्यति बेलादेखि नै ‘जनयुद्ध’मा जाने नीति थियो । अहिले बेला भएको छैन भनेर बसेका मात्र हुन् । माओको लङमार्चलाई दोहोर्‍याउने नीति नै थियो।
सन् १९९६ मा माओवादीले ‘वस्तुगत अवस्था तयार भइसकेको छ, आत्मगत अवस्थामा मात्र तयार नभएको हो, अब गर्नुपर्छ’ भन्दै विद्रोह सुरु गर्‍यो । यो विद्रोह नेपालमा पहिलोपटक भएको होइन । त्यसभन्दा ठ्याक्कै चारपाँच वर्ष अगाडि पेरुमा पनि यस्तै आन्दोलन सुरु भएको थियो । मिश्रका अनुसार नेपालमा यो विद्रोह हुनुमा रेभोलुसनरी इन्टरन्यासनल मुभमेन्ट (रिम) भन्ने संस्थाको हात छ ।
माओवादी विद्रोह ‘रिम’कै निर्देशनमा भएको हो । सन् १९९२ मा माओवादीले निर्वाचनमै भाग लिएका थिए । सन् १९९४ मा अब विद्रोहमा जानुपर्छ भनेर प्रतिवेदन खेस्रा गरे । खेस्रा गरेको प्रतिवेदन र पूर्णता दिएको प्रतिवेदनमा आकाश–जमिनको अन्तर छ । त्यसबीच रिमले भूमिका खेलेको थियो । रिमकै कारण उनीहरूले संसद् छोडेका हुन् । रिमलाई संसारभर माओको झन्डा उठाउने पार्टी चाहिएको थियो । पेरुमा त्यो भइरहेको थियो । अर्को चाहिएपछि नेपालमा पनि विद्रोह भयो । नभए माओवादी अर्को कम्युनिस्ट पार्टी हुन्थ्यो— चौम (चौथो महाधिवेशन) जस्तै । रिमबिना यहाँ ‘जनयुद्ध’ हुँदैनथ्यो ।
सन् १९६४ (विसं. २०२१) मा आएको भूमिसुधार ऐनले नेपाली अर्थ–राजनीतिमा ठूलो भूमिका खेलेको छ । त्यसले व्यक्तिमा निजी भूमिको स्वामित्व स्थापित गरिदियो । त्यसपहिले बिर्ता, जागिर भन्ने हुन्थ्यो । भूमि कर उत्पादन गर्ने खालको हुनुपर्छ भन्ने चिन्तनले २००७ सालको परिवर्तनसँगै बिर्ता उन्मूलन भयो ।
नेपाली राजनीतिमा कम्युनिस्ट पार्टीको कहिल्यै आवश्यकता नै थिएन भन्ने होइन तर आवश्यकता सकिएको भने पक्कै हो ।
त्यसगरी जागिर भन्ने थियो । राज्यले तलब दिनुको साटो दिएको जग्गा थियो त्यो । रकम भन्ने खालको अर्को खालको थियो । किपट पनि हुन्थ्यो । त्यो राज्यको केही काम गर्दिएबापत पाएको जग्गा थियो । किपट लिम्बुवानमा मात्र होइन अरू ठाउँमा पनि थियो जस्तै- सिन्धुपाल्चोकका केही ठाउँमा तामाङलाई किपट दिइएको थियो । वार्षिक रूपमा गोल दिएबापत किपट दिइएको थियो । त्यस्ता किपट फलामको काम गर्नेलाई, सुनारलाई दिइन्थ्यो ।
कसैले चर्चेको जग्गा मात्र किपट हो किनभने पृथ्वीनारायण शाहले त्यहाँ अरू जातिलाई लगेर राख्दा समस्या भएन । पृथ्वीनारायणले मात्र होइन, त्यहीँका लिम्बू–सुब्बाले पनि गैरलिम्बूलाई लगेर राखे । त्यसो गर्दा उनीहरूलाई पनि फाइदा हुन्थ्यो । दस गैह्रलिम्बूलाई लगेर राखेबापत उनीहरूले कर तिर्नु पर्दैनथ्यो । सुब्बाहरू बलियो, लिम्बूहरू कमजोर हुने गरी वर्गव्यवस्था पनि बनिसकेको थियो । त्यसैले किपट प्रणाली कमजोर भइसकेको थियो । सन् १९६४ को भूमिसुधारले सबै किपट, बिर्ता, जागिर उन्मूलन गरेर देशैभरको जग्गालाई रैकर घोषणा गरिदियो । सबै जग्गा निजीकृत गरियो जसको मालपोत तिर्नुपर्ने भयो ।
सन् १९६४ को भूमिसुधार ऐन आउनुमा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनको खासै भूमिका देख्दिनँ । त्यसमा बाहिरी कारणले ठूलो भूमिका खेले । चीनमा माओ त्से तुङको नेतृत्वमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी शासनमा आएपछि नेपालमा ठूलो सिक्वेन्स अफ इभेन्ट भएको छ । नेपालको भूमिसुधारमा त्यसको प्रभाव परेको हुनसक्छ । यद्यपि यो कुरा मिश्र ले दाबीका साथ भन्न सक्दैनन् र कतै यसबारे किताब पनि नपढेको बताउ छन् ।
इतिहास सम्झदै मिश्र अगाडी भन्छन् – सन् १९६० तिर चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति उर्लिन लागेको थियो । त्यो सांस्कृतिक क्रान्ति नेपाल छिर्ला भनेर भारतीयहरू, अमेरिकीहरू र युरोपेलीहरूलाई पीर पारेको थियो। उनीहरू यसलाई डोमिनो इफेक्ट भन्छन् । त्यति बेला उनीहरूको मनमा कम्युनिज्मले संसार खान लाग्यो भन्ने संका थियो । अमेरिकी नेतृत्वअन्तर्गत संसारभर कम्युनिज्मको फैलावट रोक्न गतिविधि गरिन्थ्यो । त्यसैले मिश्रको अन्दाज छ की चीनमा भएको कम्युनिज्मको फैलावट रोक्न नेपालमा भूमिसुधार गरिएको हुनसक्छ ।
हामी थोत्रा कम्युनिस्ट बोकेर हिँडिरहेकाछौ
उसले नेपाल सरकारलाई भूमिसुधार गर्नुपर्छ भनेर रिपोर्ट बुझायो । भूमिसुधारका केही आवश्यकता पनि थिए । जस्तै— नागरिकलाई राज्यप्रति अपनत्वबोध गराउनुपर्ने थियो । तर, सबैभन्दा ठूलो उद्देश्य कम्युनिज्म रोक्नु नै थियो । त्यति बेला नै ‘रिमार्ट एरिया डिभलपमेन्ट प्रोग्राम’ (दुर्गम क्षेत्र विकास परियोजना) लागू गरिएको थियो । त्यसैले यहाँको कम्युनिस्ट पार्टीको प्रभावले होइन कि चिनियाँ कम्युनिज्म नेपाल नछिरोस् भनेर भूमिसुधार लागु गरिएको हुनसक्छ । अर्कोतर्फ, राजा महेन्द्रलाई जनताको मन जित्नु पनि थियो । उनले यसलाई अर्को औजार बनाए ।
लेनिनको गलत बुझाई
मार्क्सले इतिहासको खास बेलामा पुँजीवाद जन्म्यो भने । पुँजीवाद सकिने कल्पना पनि गर्न सकिन्छ भन्ने बुझे । उनले त्यस बेलाका लागि पुँजीवाद जत्तिको क्रान्तिकारी पद्धति अरू केही पनि छैन भने ।
मिश्रले पनि अझै त्यही भन्छन् उनले पुँजीवादलाई निरन्तर परिवर्तनशील पद्धति भनेका छन् । मार्क्सकै पालामा पनि अब पुँजीवाद सकिने बेला भयो भन्नेहरू थिए । तर, यसलाई मूलभूत रूपमा लेनिनले उठाए । उनले सन् १९१६ मा ‘साम्राज्यवाद ; पुँजीवादको उच्चतम रूप’ भन्ने किताब लेखे । त्यसमा उनले पुँजीवाद जति माथि पुग्ने पुगिसक्यो अब यो एक धक्कामा गुल्टिन्छ भने ।
मिश्र फेरि इतिहास सम्झदै प्रश्न गर्छन् –१९१७ देखि २०१७ सम्म आइपुग्दा पुँजीवाद मर्‍यो त ? मरेको छैन, बरु झन् फैलिँदो छ । पुँजीवाद झनै प्रभावकारी भइरहेछ । गएको सय वर्षमा पुँजीवाद अझ उकालो लाग्दै छ । टुप्पोमा पुगिसकेको छैन ।
मिश्र फेरि प्रश्न गर्छन् – हेर्दाहेर्दै सिंगापुर, हङकङ, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया सबै विकसित भए । त्यसलाई के कारण दिने ? अर्थात् पुँजीवादी प्रक्रियाले प्रतिव्यक्ति आय बढाउन सक्छ । यसलाई बेवास्ता नगरौं । फेरि पुँजीवादले असमानता पनि बढाउँछ । तर, अहिलेको अवधिलाई पुँजीवाद चाहिन्छ भन्ने मात्र मिश्रको धारणा हो । पुँजीवाद सधैं रहँदैन भन्ने मिश्रलाई थाहा छ । पुँजीवादलाई सिध्याउनुपर्छ भन्ने पनि उनलाई थाहा छ । सिध्याउने बेला भएको छैन मात्र भनेका हुन् ।
लेनिनले सन् १९१७ मा जे भनेर कम्युनिस्ट पार्टी गठन गरे, जे भनेर कम्युनिस्ट शासन सुरु भए र उनलाई पछ्याएर संसारभर जति पनि कम्युनिस्ट पार्टी गठन भए, ती सबै असफल भए । भियतनाम पुँजीवादी भएर प्रगति गरेको गर्‍यै छ । कम्युनिस्ट मुलुक भनेका जम्मा दुईवटा छन्, क्युबा र उत्तर कोरिया । लेनिनले भनेको कम्युनिस्ट शासन त उत्तर कोरियाको जस्तो हो ।
नेपालमा किन फस्टाएन पुँजीवाद ?
अहिले नेपालको राजनीति हेर्दा डाँको छोडेर रुनुपर्ने अवस्था छ । ४० लाख युवालाई बाहिर पठाएर के गर्ने हो ? उनीहरूलाई कसले काम दिन्छ ? कम्युनिज्मले उनीहरूलाई काम दिन्छ ? अबको १०/२० वर्षमा गाउँका युवालाई फर्काएर काम दिने कसले हो, समाजवादले कि पुँजीवादले ?
लोकतान्त्रिक समाजवाद चाहिन्छ
अर्को समाजवाद लोकतान्त्रिक समाजवाद हो। यो अहिले कम्युनिस्टहरूले निर्माण गर्नुपर्ने समाजवाद हो । मार्क्सको समाजवादले स्वामित्व र उत्पादनलाई निजी हुनै दिँदैन । लोकतान्त्रिक समाजवादले के भन्छ भने पुँजीवादबाट जेजति लिन मिल्छ लिऊँ । त्यसलाई नमारौं किनभने यो अहिलेको लागि सुनको फूल पार्ने कुखुरा हो । यो मर्छ भन्ने हामीलाई थाहा छ । तर, अहिलेको ऐतिहासिक अवधिमा यसको उन्नति नै गरौं । यसबाट आर्थिक उन्नति हुन्छ । आर्थिक उन्नति गर्ने उद्योग र त्यसबाट धेरै कमाउने मानिसलाई कर लगाऔं ।
श्रोत्: अन्नपुर्ण पोस्ट
चर्चित मोडल राजु महोत्राको तीज उपहार लालुमै भाग -२(बोल है माया) →